Darpan Nepal – घरमा सुख-शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ ? लगातार ३ शुक्रवार अपनाउनुहोस् यी उपाय !
Oct 12, 2018Admin12Intresting fact0Like
घरमा सुख-समृद्धि बनाइ राख्नको लागी देवी लक्ष्मीको पुजा भगवान बिष्णुको साथमा गरिरहनु पर्छ। ज्योतिषका अनुसार हप्ताको सातै दिन अलग-अलग देवी-देवताहरुसंग सम्वन्धित छन्। शुक्रवार देवी लक्ष्मीको बिशेष पुजा गरिन्छ। महालक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नाको लागी शास्त्रमा धेरै उपाय बताइएको छ। यी उपाय मध्य केहि उपाय यस्ता छन् जुन बिशेष गरी हरेक शुक्रवार गर्नुपर्छ।
यस्ता छन् ति ३ उपाय:
Previous Postदसैंको मुखमा सुनको मूल्य प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँ Next Postभगवान प्रती बिश्वास हुनेले यो फोटो पहिले छुनुहोस त्यसपछी लामो श्वास लिएर ॐ जप्नु होस सबै दुख नास हुनेछ..